China Girazi Rod, Inotenderera Lens, Optics Ye Lasers Mugadziri uye Mutengesi
Tsanangudzo:Girazi Rod,Inobatanidza Lens,Optics Kune Lasers,Girazi Cylinder,,
 HomeProductsGirazi Rod
Girazi Rod (Total 8 Products)
Zvigadzirwa zve Girazi Rod , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Girazi Rod , Inobatanidza Lens vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Optics Kune Lasers R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Unpolished optical magirazi matanda
Iyo N-BK7 tsvimbo dzakagadzirirwa kushandiswa mune dzakasiyana siyana laser uye imaging masystem. Tsika tsvimbo dzinogona kuita kuti magumo asvibiswe, akapararira uye akasarudzika kana kukwenywa. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.5-300mm...
Yakagadzirirwa kushandiswa mune dzakasiyana siyana laser uye imaging masisitimu. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi Dhayamita: 0.5mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20 Bevel: Inodzivirira bevel...
Tsika tsvimbo pasina kupukuta. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.5mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Bevel: Inodzivirira bevel pazvinodiwa
Yakagadzirirwa kushandiswa mune dzakasiyana siyana laser uye imaging masisitimu. Iwo matanda akagadzirwa kubva kuFused Silica zvinhu izvo izvo zvinhu zvine yakanaka kemikari kuramba uye yakanyanya kupisa kupisa. Iyo zvakare ine yakadzika yekushisa...
China Girazi Rod Vatengi
Realpoo Optics 'Nhungamiro Tsvimbo idzo dzakatwasuka tsvimbo dzinoenderana nekushandisa kunoda kuwanda kwechiedza kutapurirana pamwe nekusanganisa kwemaziso mumatanho akatwasuka. Ivo anowanzo shandiswa kupatsanura kana kure kuona pikicha sensors uye mwenje masosi.
About makorari, tinogona kupa dzakasiyana mikana: Flat pamusoro makorari uye vakakotamisa pamusoro kwete makorari; kana kukotamisa pamusoro kwepolishing uye maviri akati sandara nzvimbo kwete kupukuta; kana nzvimbo dzese dzisiri kupukuta. Zvese zvinoenderana nezvaunoda.
Girazi Rod Inobatanidza Lens Optics Kune Lasers Girazi Cylinder Fiber Girazi Rod